हनुमानको क्रोधका अघि श्रीकृष्णले बन्नु पर्‍यो श्रीराम
गरुड, सुदर्शन चक्र र श्रीकृष्णकी रानीहरूको गर्व-भङ्ग
काठमाडौँ । एक पटक भगवान् श्री कृष्णले गरुडलाई यक्षराज कुबेरको सरोवरबाट सुगन्धित कमल ल्याउने आदेश दिनुभयो। गरुडलाई म जस्तो बलियो र द्रुत गतिले चल्ने जीव यस तीनै लोकमा अरू कोही छैन भन्ने अहङ्कार थियो । उनी आफ्नो पखेटाले हावालाई चिर्दै दिशाहरू प्रतिध्वनि गरेर गन्धमदाना पुगेर फूलहरू तोड्न थाले । महावीर हनुमानजीको निवास त्यहाँ थियो। गरुडको यो व्यभिचार देखेर, उनले भने - 'तिमि कसको लागि यो फूल चुँडिरहेका छौँ । फूलहरूलाई विनाश गर्दै छौँ, कुबेरको आज्ञा बिना तिमि किन यी फूलहरू नष्ट गर्दै छौँ?'
गरुडले जवाफ दिए - 'म यी फूलहरू भगवान् श्री कृष्णका लागि लिइरहेको छुँ। भगवानको लागि फुल चुँड्न कसैको अनुमति चाहिँदैन। यसबाट हनुमानजी क्रोधित भए, र उनलाई समातेर उनको काखमा च्यापेर आकाश मार्गबाट द्वारिका तर्फ उडे । उनको क्रोध र भीषण ध्वनिका कारण सबै द्वारका बासीहरू त्रसित भए । सुदर्शन चक्र हनुमानजीको गतिलाई रोक्न उनको अगाडि गए। हनुमानजीले उनलाई तुरुन्तै अर्को काखमा दबाए ।
भगवान् श्री कृष्णले यी सबै लीलाको सिर्जना गर्नुभएको थियो। वहाँले आफ्नो छेउमा बस्ने रानीहरूलाई भन्नुभयो, 'हेर, हनुमान रिसाएर आएका छन्। यदि उनले यस समयमा सीता-रामलाई देखेनन् भने, उनले सारा द्वारकालाई समुद्रमा डुबाइदिनेछन् । त्यस कारण तिमिहरू मध्ये कोही एकले तुरुन्तै सीताको रूप धारण गर, म राम बन्दै छु । '
यती भनेर श्रीकृष्णले श्री रामको रूप लिनुभयो । अब गोपिनीहरूले जानकीको रूप लिन सकेनन् । अन्तमा, भगवानले राधालाई सम्झनुभयो । उहाँ आउनुभयो र तुरुन्तै माता सीताको रूप लिनुभयो।
यस बिच हनुमानजी त्यहाँ पुगे। त्यहाँ उनी आफ्नो इष्टदेव श्रीसीतारामजीलाई देखेर चरणमा गिरे । सो समय पनि उनले गरुड र सुदर्शन चक्रलाई दबाइरहेका थिए। भगवान् श्रीकृष्ण (रामको रूपमा) उनलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो - 'वत्स! तिम्रो काखमा के दबाइ रहेका छौँ ? '
हनुमानजीले जवाफ दिए - 'प्रभु केही छैन! यो एक क्षुद्र पक्षी निर्जन स्थानमा मेरो श्री राम भजनमा बाधा पुर्‍याइरहेको थियो, त्यसै कारण मैले उनलाई समातेँ। दोस्रो, यो एक चक्र जस्तो खेलौना हो, यो मसँग टकराइ रहेको थियो, त्यसैले यसलाई पनि दबाए । यदि तपाईँलाई फूलहरू चाहिएको थियो भने मलाई किन सम्झनु भएन? यी बिचरा महाबली शिव भक्त यक्षको तालबाट जबरजस्ती फूलहरू कसरी ल्याउन सक्छन्?'
भगवानले भन्नुभयो - 'अस्तु! यी बिचराहरूलाई छोड्नुहोस्। म तिमी प्रति धेरै खुसी छु, अब तिमी जाऊ, आफ्नो ठाउँमा स्वच्छन्दतापूर्वक भजन गर। '
भगवानको अनुमति पाउने बित्तिकै हनुमानजीले सुदर्शन चक्र र गरुडलाई छोडिदिए । हनुमान 'जय राम' भन्दै दण्डवत्‌ गरेर गन्धमादानमा फर्किए। गरुडको गतिको, सुदर्शन शक्तिको र पट्टमहिषियोंको सुन्दरताको जुन धेरै गर्व थियो, त्यो चकनाचुर भयो ।(ब्रह्मवैवर्त पुराण)
धरान र ढल्केवर कृषि उपज बजारमा माछापुच्छ्रे बैङ्कको क्युआर कोर्ड सेवा
धनगढीस्थित त्रिनगर कृषि उपज हाटबजारमा माछापुच्छ्रे बैङ्कको क्युआर कोड सेवा
तीनकुनेस्थित हरित सामुदायिक कृषि बजारमा माछापुच्छ्रे बैङ्कको क्युआर कोड सेवा